Ukuphupha ngomthandazo Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Inkolelo kumandla aphezulu ibisoloko ibaluleke kakhulu kubomi babantu. Ngomthandazo sizama ukunxibelelana nala mandla aphezulu kwaye, ngaphezulu kwako konke, sijonge phambili kwinkxaso yabo okanye kuncedo ngomcimbi. Unokuba ngu-Allah kwi-Islam okanye kuThixo ebuKristwini, uYehova kubuYuda okanye eBrahma, eShiva, eVishnu naseSaraswati kubuHindu. AmaYiputa ayedla ngokuthandaza kwizithixo zawo zaseYiputa kwaye amaRoma nawo ayenqula izithixo zabo, ezifana noJupiter.
Kodwa kuthetha ntoni xa isivakalisi sibonakala kwilizwe lethu lamaphupha? Luluphi utoliko olukhoyo lomqondiso wephupha "umthandazo"?
1 Uphawu lwephupha «umthandazo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umthandazo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umthandazo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umthandazo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha ubona uphawu lwephupha "umthandazo" rhoqo ngokunxulumene ne Isimo sengqondo sokungazi yokuphupha. Ukuphupha kuzinikezele kwisiphelo saso kwaye kulindelwe ngeendlela ezininzi uncedo lwendalo esingqongileyo. Ngophawu lwephupha, iphupha ngoku libonisa ukuba kufuneka ubuthathele ezandleni zakho ubomi bakho. Ukuma kwakho ngokuthobekileyo kokulinda ngelixa uthandaza ephupheni ngamanye amaxesha kunokuba yibhonasi, kodwa ngokuqinisekileyo kufuneka ukhuthele ngokunjalo.
Ngamanye amaxesha, uphawu "lwamaphupha" lungabonisa iphupha onalo el mundo ukuvuka. Iidayes y Ithemba siza kudibana kungekudala. Esi sithembiso sibonwa kwakhona ngokusondeleyo ngokunxulumene nokutolikwa kokuqala. Kungenxa yokuba eminye iminqweno inokuzalisekiswa kuphela ngokwenza kwakho into esebenzayo. Ayizizo zonke izinto ezilungileyo ezivela phezulu.
Umfuziselo wephupha "umthandazo" ubiza iphupha ngokwenkcazo ngokubanzi yephupha, kodwa kananjalo ukubonakalisa ngokwalo. Mhlawumbi kungekudala kuya kubakho enye kwihlabathi lokuvuka isigqibo esisigqibo ngokuphupha. Ke ngoko, kufuneka acace gca malunga nokuba yeyiphi eyona nto imlungeleyo okanye yintoni ehambelana ngqo neminqweno yakhe. Ukuba uyathandaza irosari Ngelixa uleleyo, unokujongana nexesha elinzima leentlungu.
Ukuba iphupha liyazibona ngexesha lomthandazo okanye incoko yangaphakathi noThixo ephupheni, mhlawumbi nangexesha lombhiyozo wobudlelane, uphawu lwephupha lubonisa ukuba ikamva lakho lisikelelwe, kodwa ke kunjalo. uncedo edinga usapho okanye abahlobo bakho. Ityala, apho kucelwa intsikelelo kaThixo kule ndlu intsha, ihlala ithembisa ngesiqalo esitsha.
Umthandazo ephupheni ecaweni okanye kwindawo engcwele, mhlawumbi nakwindawo yokugcina izidumbu, ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, luphawu Ukuziva unetyalaloo maphupha akhathazayo kwihlabathi elivukayo. Ukuba iphupha lithandaza ephupheni ekhaya, ngokunokwenzeka naphambi kwekhandlela elivuthayo okanye intonga yesiqhumiso, le meko yephupha imfuzisela yena ukuba uya kufumana inkxaso kubantu abanobuhlobo kwimeko enzima.
Ukuba umntu ebefuna ukucela ubabalo lothixo ephupheni ngokusebenzisa i-rune yomlingo, oku kunokwenzeka ukuba kubonakalise umnqweno woncedo.
Uphawu lwephupha «umthandazo» - ukutolikwa kwengqondo
Njengakwilizwe elivukayo, umfuziselo wephupha "umthandazo" utolikwa ngokwasengqondweni njengelinge lephupha lokunxibelelana namandla aphezulu. Ubuyela kubo ngokuzithemba.
Kwingcaciso yengqondo yamaphupha, nangona kunjalo, eli gunya liphezulu lihlala liyifihla loo nto engekho zingqondweni yokuphupha. Ngomthandazo wakho ephupheni uzama ukunxibelelana nale nto ukuze ikukhuphe kwimeko enzima okanye engathandekiyo. Ke ngoko, umphuphi uyazi kakuhle ukuba isisombululo seengxaki zakhe kwihlabathi lokuvuka sifumaneka kuye. Uphawu "lwamaphupha" ephupha lifuna ukukubonisa kwakhona kwakhona.
Uphawu lwephupha «umthandazo» - ukutolika kokomoya
Ingcaciso yephupha lokomoya iguqulela uphawu "lomthandazo" njengobungqina bobukho be amandla aphezulu ngephupha kunye nomnqweno wakhe wokufuna uncedo ngale nto.